တရုတ်စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ် Pyrolysis စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ LYBH
စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်များသည်အခြောက်ခံခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ကြေမွခြင်းနှင့်အခြားဖြစ်စဉ်များပြီးနောက်၎င်းတို့သည်သင့်လျော်သောအရွယ်အစားကိုရရှိနိုင်သည်။
စဉ်ဆက်မပြတ် pyrolysis စနစ်
စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်များသည် pyrolysis ဓာတ်ခွဲခန်းမှတစ်ဆင့် pyrolysis ဓာတ်ပေါင်းဖိုထဲသို့စဉ်ဆက်မပြတ်တိုက်ကျွေးသည်။
စဉ်ဆက်မပြတ် pyrolyzer မှရရှိသောရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုအအေးနှင့်ခွဲထုတ်ပြီးနောက်လောင်စာဆီသည်ရေနံသိုလှောင်ကန်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးရေနံစုပ်စက်ဖြင့်တိုင်ကီtransportရိယာသို့သယ်ယူပို့ဆောင်သည်။
pyrolysis မှရရှိသောလောင်ကျွမ်းသောဓာတ်ငွေ့ကိုလောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့သန့်စင်ခြင်းစနစ်ဖြင့်သန့်စင်ပြီးဖိအားထိန်းချုပ်စက်၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်ရှိဖိအားထိန်းချုပ်သည့်ကိရိယာထဲသို့ရေတံဆိပ်ခတ်သည့်တင့်ကားမှတဆင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ သန့်စင်ပြီးနောက်ဓာတ်ငွေ့မဟုတ်သောဓာတ်ငွေ့ကိုအပူယူနစ်သို့ပို့သည်။ လောင်ကျွမ်းခြင်းအားဖြင့်ထုတ်လွှတ်အပူစွန့်ပစ်တာယာ၏ pyrolysis များအတွက်အသုံးပြုသည်။
စဉ်ဆက်မပြတ် pyrolysis ဓာတ်ငွေ့ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောအပူချိန်မြင့်မားသောအစိုင်အခဲထုတ်ကုန်များကိုအဆင့်မြင့်ရေအေးဖြင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောအပူချိန်သို့အအေးခံပြီးနောက် conveyor မှအစိုင်အခဲထုတ်ကုန် silo သို့ပို့ဆောင်သည်။
Flue Gas သန့်စင်စနစ်
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည် PLC / DCS control system ကိုလက်ခံပြီး node တစ်ခုချင်းစီတွင် real-time monitoring ကိုပြုလုပ်ရန်နှင့် cloud မှ console သို့ပေးပို့ရန်အတွက် cloud တွင် data transmission ကိုစောင့်ကြည့်သည်။ ထိန်းချုပ်သည့်နေရာသည်အသိဥာဏ်ရှိသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတာယာ၏အန္တရာယ်ကင်းသောကွဲအက်မှုကိုသိရှိနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း၊ တွက်ချက်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အစီရင်ခံစာပုံစံများကိုပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအကြိုထုတ်လုပ်မှု၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုတို့ကိုသေချာစေသည်။
၂။ အလိုအလျောက်မြင့်မားသောအပူချိန်၊ တံဆိပ်ခတ်ထားသည့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု၊
3. ထူးခြားသော anti-stick နံရံသည်အထူးကုန်ကြမ်းများအဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုသဘောပေါက်နိုင်သည်။
4. အကြီးစားကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်း၊ နေ့စဉ်ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းတန်ချိန် ၅၀ မှ ၁၀၀ အထိ။ လောင်ကျွမ်းခြင်း မှလွဲ၍ pyrolysis မှထုတ်လုပ်သောဓာတ်ငွေ့မဟုတ်သောဓာတ်ငွေ့သည်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်း (အထွေထွေအန္တရာယ်ရှိသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသန့်စင်မှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှု) နိုင်ငံတော်၏မူပိုင်ခွင့်ဖုန်ဖျက်ခြင်း၊ မီးခိုးအက်ဆစ်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ဖုန်မှုန့်များတွင်ဖုန်မှုန့်များကိုဖယ်ရှားပါ။
စွန့်ပစ်တာယာများ၊ ရာဘာစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ ပလတ်စတစ်အမှိုက်များ၊ acrylic စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ ရွှံ့နွံများ၊ အိမ်ထောင်စုအမှိုက်များ
pyrolysis အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက် 3.The ရရှိနိုင်လောင်စာ
နံပါတ် အမျိုးအစား ဆီထွက်သီးနှံ
1 PVC / PET မသန့်ရှင်းနိုင်ပါ
2 PE ၉၅%
3 PP ၉၀%
4 PS ၉၀%
5 ပလပ်စတစ်ကြိုး ၈၀%
6 ABS ၄၀%
7 ပလပ်စတစ်အိတ် ၅၀%
ရှေ့သို့ ပြည်တွင်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်း pyrolysis စက်ရုံ
နောက်တစ်ခု: စဉ်ဆက်မပြတ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတာယာ Pyrolysis Plant
Pyrolysis အဆက်မပြတ်ပစ္စည်းကိရိယာ 30-40tpd
အလိုအလျောက် Pyrolysis ပစ္စည်း
China စွန့်ပစ်ပစ္စည်းယာများအမြဲတမ်း Pyrolysis ပစ္စည်း
စဉ်ဆက်မပြတ်တာယာ Pyrolysis စက်ရုံ
စဉ်ဆက်မပြတ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတာယာ Pyrolysis ပစ္စည်း
Pyrolysis ပစ္စည်းတရုတ် Bjl5-30tpd
တုရုအတွက် Pyrolysis ပစ္စည်း
အသုံးပြုသောတာယာ Pyrolysis ပစ္စည်းတွေ
ဓါတ်ငွေ့အဆင့်တုံ့ပြန်မှုအပူချိန် 450-550 after အောက်ရှိလေဆာဖြင့်အစာရှောင်ခြင်း pyrolysis ၏အခြေအနေအောက်တွင် pyrolysis မှတဆင့်စဉ်ဆက်မပြတ် pyrolysis စနစ်အတွက်, အနီရောင် conveyor, ခါးပတ်စကေး, ဝက်အူ conveyor ပြီးနောက်ပြီးနောက်တာယာ၏အပိုင်းအစများပြိုကွဲလိမ့်မည် ဓာတ်ပေါင်းဖိုမှထွက်လာသောဓာတ်ငွေ့၊ ကာဗွန်နက်၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့်မီးလောင်လွယ်သောဓာတ်ငွေ့၊ လောင်စာဆီနှင့်ဓာတ်ငွေ့ပြန်လည်ထုတ်ယူသောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုထုတ်ကုန်တစ်ခုလုံးအတွက်သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
သုတ် Pyrolysis စက်ရုံ, စဉ်ဆက်မပြတ် Pyrolysis စက်ရုံ, ပလတ်စတစ်ပြန်လည်ပြုပြင်စက်, အမှိုက်ပုံးအားပြန်လည်အသုံးချစက်, စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်သန့်စင်စက်ရုံ, တုရုပြာ,